Semalt को साथ तपाईंको SEO प्रदर्शन विश्लेषण गर्ने तरिकाहरू
एसईओ प्रदर्शन एनालिसिस के हो?
एसईओ प्रदर्शन को लागी आवश्यक
SEALALT संग एनालिजिंग एसईओ प्रदर्शन
हरेक दिन असंख्य वेबसाइट मालिकहरू, वेबमास्टरहरू, विश्लेषकहरू, र डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीहरू दिमागमा आक्रोशित छन् कि या त उनीहरूको आफ्नै वा ग्राहकको वेबसाइटहरूको Google खोजी परिणामहरूमा स्तर निर्धारण गर्न।
तिनीहरूको सबै प्रयासहरू एकल अवधि, SEO को वरिपरि घुमाउँछन्। SEO आवश्यकतालाई पहिचान र कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूलाई SERPs (खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठहरू) मा वेबसाइटको स्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ वेबसाइटको एसईओ प्रदर्शन विश्लेषण गर्न उपकरणहरू उपलब्ध छन्, तर सहि फेला पार्न आधा रैंकिंग लडाई जित्नु भन्दा कम केहि छैन।
यो लेखले तपाइँलाई एसईओ प्रदर्शन विश्लेषणको समझ प्रदान गर्दछ र कसरी एक विश्वसनीय स्रोत, Semalt, तपाइँलाई तपाइँको एसईओ लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
यदि तपाईं Semalt को वेबसाइट एनालिटिक्स उपकरणबाट लाभ लिन प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र रमाउनुहोस्। तपाईं लेख पढ्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ र Semalt को साथ SEO प्रदर्शन विश्लेषण गर्ने तरिकाहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ।
SEO प्रदर्शन विश्लेषण के हो?
SEO प्रदर्शन विश्लेषण विभिन्न SEO सम्बन्धित प्यारामिटरहरूमा एक साइटको सावधानीपूर्वक परीक्षा हो। यसमा एक वेबसाइट अडिटिंग र SERPs मा उच्च श्रेणीको लागि अप्टिमाइजेसनको आवश्यकताहरू पहिचान गर्न शामिल छ।
एसईओ प्रदर्शन विश्लेषण तपाइँ तपाइँको एसईओ रणनीति ट्र्याक मा छ कि जो पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ र कुन समस्याहरु, तपाइँको साइट को रैंकिंग को प्रभावित, तपाइँ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
SEO प्रदर्शन विश्लेषणको महत्व
एसईओ प्रदर्शन विश्लेषण द्वारा प्रदान गरिएको अन्तर्दृष्टि अन्ततः तपाइँलाई निम्नका साथ मद्दत गर्दछ:
तपाईंको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
तपाईंको वेबसाइटमा अधिक यातायात ड्राइभ्स।
यो खोज परिणाम मा तपाइँको वेबसाइट को रैंक उच्च मद्दत गर्दछ।
तपाईंलाई आफ्नो व्यावसायिक उद्देश्यहरू छिटो प्राप्त गर्न दिन्छ।
यो विश्लेषणको साथ, तपाइँ राम्रो सोच र रणनीतिक निर्णय लिनुहुन्छ। तपाईंको साइटको स्तर सुधार गर्नका लागि आवश्यक समय र पैसा पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्छ।
विस्तृत एसईओ प्रदर्शन विश्लेषणको अनुपस्थितिमा, गुगल खोजी परिणामहरूमा साइटको श्रेणी सुधार गर्न सूचित निर्णयहरू गर्न असम्भव छ।
गुगलको एल्गोरिदममा पछिल्ला घटनाक्रमहरू पुरस्कृत साइटहरूमा केन्द्रित छन् जुन सामग्री मार्फत प्रासंगिकता देखाउँदछ, र उच्च श्रेणीमा टेक्निकल ट्रिकहरू मात्र प्रयोग गर्दैन।
त्यहाँ धेरै एसईओ फाउन्डेन्म्स छन् एक वेबसाइटलाई विश्लेषण र अनुकूलन गर्न सहयोगी। केहि आवश्यकहरू:
सामाजिक मीडिया संलग्नताहरू
तिनीहरू प्रत्येकलाई बुझौं:
प्रत्येक वेबसाइटले वेब क्रॉलरहरूलाई टेक्निकल जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्दछ कि तिनीहरूले बुझ्दछन्, पत्ता लगाउन सक्छन् र यसलाई खोजी परिणामहरूमा सूचीबद्ध गर्दछन्। यी प्राविधिकता या त सक्रिय वा निष्क्रिय छन्, वेबसाइट मालिकको कार्यहरूमा निर्भर गर्दछ।
सक्रिय प्राविधिकताहरू साइटमा हुने परिवर्तनहरूको बारेमा खोजी ईन्जिनहरूलाई सूचित गर्न पहलहरू समावेश गर्दछ। यस दृष्टिकोणको उदाहरणले तपाईंको वेबसाइटलाई यसको एसईओ प्रदर्शन अनुगमनको लागि खोजी ईन्जिनहरूको वेबमास्टर उपकरणहरूसँग जडान गर्दैछ।
निष्क्रिय प्राविधिकताहरू साइट ईन्डेक्सिंग पृष्ठहरूका लागि आवश्यक जानकारी खोजी ईन्जिनहरू प्रदान गर्न गरिएका पहलहरूको समावेश गर्दछ। एक निष्क्रिय दृष्टिकोण उदाहरण खोज ईन्जिनमा XML फाईल प्रदान गर्नु हो ताकि तिनीहरूलाई कुन सामग्रीलाई अनुक्रमणिका आवश्यक पर्दछ भनेर राम्ररी बुझ्न सकिन्छ।
यदि तपाईंको वेबसाइटमा एसईओको अभाव छ भने, तपाईंले सिर्जना गर्ने र उत्साहजनक सामग्री निर्माणमा राख्नु भएको सबै प्रयासहरू व्यर्थ हो किनभने खोजी ईन्जिनहरूले तपाईंको साइटलाई अनुक्रमणिका गर्न असफल हुन्छन्।
कुञ्जी शब्दहरू शब्दहरू वा वाक्यांशहरू हुन् जुन मानिसहरूले उत्पादहरू, सेवाहरू, वा खोज इञ्जिनहरू मार्फत जानकारीको लागि खोजी गर्दछन्। सामग्री प्रकाशकहरू र वेबसाइट मालिकहरूले उनीहरूका उत्पादनहरू वा सेवाहरू खोज्नका लागि प्रयोग हुने कुञ्जी शव्दहरू पहिचान गर्छन्, र यसैले प्रासंगिक सामग्री सिर्जना गर्दछ।
जब तपाइँ कीवर्डहरू तपाइँको प्रस्तावमा सबैभन्दा प्रासंगिक फेला पार्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई सामग्री प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। परिणाम स्वरूप, तपाइँको वेबसाइट अधिक र अधिक यातायात आकर्षित गर्दछ।
नोट गर्नुहोस् कि तपाईंले कुञ्जी शव्दहरू अधिक मात्रामा, दुरुपयोग, वा दुरुपयोग गर्नु हुँदैन किनभने जब यो हुन्छ, सर्च ईन्जिनहरूले वेबसाइटलाई सजाय दिन धेरै समय खेर फाल्दैनन्।
वेबसाइटहरूले वेब पृष्ठहरू मार्फत सञ्चार गर्छन्, र यी वेबपृष्ठहरूले सामग्रीको कोडिंगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ (सामग्रीको बारेमा केहि निर्दिष्ट दिशानिर्देशहरू र नियमहरू पालना गर्नुहोस्) वेबसाइटको पहुँच र खोजी ईन्जिन र्याकिंग अधिकतम बनाउन।
सामग्री-कोडिंगले वेबपृष्ठको उचित संरचना समावेश गर्दछ। यसले वेबपृष्ठमा खोज ईन्जिनहरूमा सामग्रीको अर्डरको वर्णन गर्नुपर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि वेबपृष्ठको शीर्षक, यसको हेडिंग र उपशीर्षक (H1, H2, H3, H4), यसको अंश, र अन्य चीजहरू खोज ईन्जिनहरू द्वारा सजिलै पहिचानको लागि कोड गरिएको छ।
तपाईंले उपयुक्त कुञ्जी शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूको घनत्वलाई तपाईंको वेबपृष्ठमा सही राख्नुपर्दछ। भिडियो र छविहरूको लागि कुञ्जी शब्द घनत्व दिशानिर्देशहरूको पनि ख्याल राख्नुहोस्।
आज, ब्याकलिks्कहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनकि तिनीहरूले खोज इन्जिनहरूमा वेबपृष्ठको रैंकिंगलाई प्रभाव पार्छन्। ब्याकलिks्कहरू केवल वेबपृष्ठमा लिंक गर्ने वेबसाइटहरू हुन्।
ब्याकलिंक्सको खेल बुझ्नु जटिल छ। त्यहाँ दुइटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ:
गुगलमा अनुक्रमित सबै साइटहरूलाई पृष्ठ लिंक प्रदान गरियो तिनीहरूलाई फिर्ता लि l्क गर्ने साइटहरूको संख्याको आधारमा।
एकल वेबसाइट बाट आउने ब्याकलिks्कसँग कम पेजराank्क भएका सयौं साइटहरूको ब्याकलिks्कको तुलनामा बढी तौल हुन्छ।
यदि तपाईंको वेबपृष्ठले उच्च पृष्ठ र्याँकको साथ एक वेबसाइटबाट ब्याकलिlin्कहरू प्राप्त गर्दछ भने, खोज ईन्जिनहरूले तपाईंको वेबपृष्ठलाई एउटा महत्वपूर्ण स्रोत मान्न थाल्छ, र यसैले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ।
सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू धेरै कुशल हुन्छन् जब यो सामग्री साझा गर्न आउँदछ। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, र अन्य जस्ता सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा एउटा लेख वा मिडिया फाइल साझा गर्नुको मतलब वेबसाइटमा उच्च पेजर्याक ब्याकलिks्कहरू सिर्जना गर्नु हो।
लगभग सबै सामग्री को लागी कसैले पनि सामाजिक मिडिया मा साझा योग्य छ, केहि मानिसहरु सोच अधिक शेयरिंग को एक वेबसाइट को स्तर को सुधार छ। ठिकै छ, यो १०० प्रतिशत सत्य होइन।
खोज इञ्जिनहरूको लागि, सामग्रीको एक टुक्रा मूल्यवान छ यदि योसँग बढी साझेदारीको साथ अधिक सेयरहरू छन्। यसले मनपर्ने, टिप्पणी, र पुन: ट्वीटहरू वा पुन: सेयरहरूको संख्या समावेश गर्दछ।
यदि यो तपाइँको वेबसाइटको साथ हुन्छ भने, खोजी ईन्जिनहरूले महसुस गर्नेछन् कि यसमा रहेको सामग्री मूल्यवान छ र यसले कार्यहरू मार्फत प्रशंसा एकत्र गरेको छ। त्यसोभए, उनीहरूले यसलाई स्वाभाविक रूपमा उच्च स्तरमा राख्नेछन्।
गुगलले खोज ईन्जिनहरू, वेबसाइटहरू मात्र प्राविधिक अनुपालन, कुञ्जी शब्द, सामग्री, र सामाजिक मिडिया साझेदारीको कारणले गर्दा होईन तर वेबपृष्ठको सामग्रीको साथ प्रयोगकर्ताहरूको वास्तविक अनुभवको कारण पनि हो।
प्रयोगकर्ता अनुभवले वेबसाइटको डिजाइन र यसमा सामग्रीको प्लेसमेन्ट समावेश गर्दछ। अन्य आधारभूतहरू बाहेक, गुगलले वेबपृष्ठमा एक्शन एलिमेन्ट कलमा प्लेसमेन्टलाई पनि विचार गर्दछ।
गुगलले सराहना गर्दछ यदि विज्ञापन वा सदस्यता बटन वा खरीद बटनको रूपमा तत्वहरू पृष्ठ स्क्रोल नगरीकन पहुँचयोग्य छन् भने। हो, यसले वेबसाइटको श्रेणीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
यसको मतलब यो सेक्शनको दुरुपयोग (पटिको माथि) होइन। उदाहरण को लागी, गुगलले सजाय दिन्छ जब यो फेला पार्छ कि तपाईंको वेबसाईटमा फोल्डर माथि बढि विज्ञापन छन्।
एक वेबसाइटसँग अनुक्रमणिका हुन र खोजी ईन्जिनमा क्रमबद्ध गर्न सामग्री हुनुपर्दछ। यदि वेबसाइटहरूमा अधिक सामग्री पृष्ठहरू छन् भने, खोज इञ्जिनसँग सन्दर्भका लागि अधिक लिंकहरू छन्।
यो समाचार साइटको लोकप्रियता र सफलताको कारण हो। तिनीहरू नियमित रूपमा धेरै सामग्री प्रकाशित गर्छन् जसले फलस्वरूप अनुक्रमित पृष्ठहरूको संख्या मात्र बढ्दैन तर ट्राफिक पनि बढाउँदछ।
त्यहाँ विशेष ब्लगहरू पनि छन् जुन नियमित रूपमा समान पोषण र विषयवस्तुहरू भएको लेख पोष्ट गर्दछ। यस व्यवस्थाले Google लाई भन्दछ कि यी विशेष ब्लगहरू संसाधन छन्। त्यसोभए, यसले उनीहरूलाई उच्च स्थान दिन्छ।
यसको अर्थ सामग्री प्रकाशन फ्रिक्वेन्सी एक महत्त्वपूर्ण र्यान् factor्ग कारक हो। यदि तपाईं नियमित रूपमा तपाईंको वेबसाइटमा नयाँ, अनुकूलित, र प्रासंगिक सामग्री पोस्ट गर्नुहुन्छ भने, खोज ईन्जिनहरूले यसलाई अवलोकन गर्नेछ र यसको स्तर सुधार गर्नेछ।
Semalt को साथ SEO प्रदर्शन विश्लेषण
SEO को सबै आवश्यक तत्वहरूको ख्याल राख्नु कुनै व्यक्तिको लागि सजिलो हुँदैन। यसैले त्यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कम्पनीहरू छन्, जस्तै Semalt, विशेषज्ञहरू छन् फरक SEO तत्वहरू ह्यान्डल गर्न।
Semalt जस्ता कम्पनीहरूमा, केही विशेषज्ञहरूले सामग्री क्युरेसन, केही ह्यान्डल टेक्निकलिटीहरू, केहि ब्याकलिlin्कमा केन्द्रित गर्दछन्, र यो यसरी जारी रहन्छ। यी विज्ञहरूको सामूहिक प्रयासहरूले वेबसाइटको एसईओ प्रदर्शन सुधार गर्दछ।
Semalt ले अर्को स्तरको वेब एनालिटिक्स सेवा प्रदान गर्दछ कि:
तपाईंको लागि बजार अनुगमन गर्दछ
तपाईंको प्रतिस्पर्धी को स्तर निर्धारण को साथ साथै ट्र्याक गर्दछ
तपाईंको व्यवसायको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन्छ
Semalt सबै KPIs (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) को साथ SEO को सफलता को लागी मद्दत गर्दछ। तिनीहरू मध्ये केही हुन्:
प्रतिस्पर्धी को स्तर निर्धारण
विस्तृत वेबसाइट विश्लेषण
जैविक खोजी ट्राफिक
वेबसाइट एनालिटिक्स कसरी काम गर्दछ?
पहिले, तपाइँ Semalt को साथ दर्ता गर्नु पर्छ र विश्लेषणात्मक डेटा प्राप्त गर्न प्रक्रिया सुरू गर्नु पर्छ। जब प्रक्रिया पूरा हुन्छ, तपाइँले विस्तृत रिपोर्ट पाउनुहुनेछ:
तपाइँको वेबसाइट को स्थिति
तपाईंको प्रतिस्पर्धी को स्तर
वेबसाइट डिजाइन र एसईओको उद्योग मापदण्डको सम्बन्धमा तपाइँको वेबसाइटको मूल्याation्कन
तपाईं यस विस्तृत रिपोर्टलाई CSV मा रूपान्तरण गर्न साथै PDF ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नुहोस्। Semalt ले यो एनालिटिक्स रिपोर्ट ईमेल गर्न पनि अनुमति दिन्छ।
एक वेबसाइट को विश्लेषणको साथ शुरू सजिलो र नि: शुल्क छ। तपाईलाई साइटको डोमेन प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ, र एक वा दुई मिनेट भित्रमा तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई खोज परिणाममा उच्च श्रेणीबाट रोक्ने कारकहरूको बारेमा सिक्नुहुनेछ।
तपाइँको साइटलाई नि: शुल्क 'PRO विश्लेषण' मा थप्नको लागि, तपाइँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तल स्क्रोल गर्नुहोस्। जब तपाइँ यसलाई फेला पार्नुहुन्छ, मात्र तपाइँको वेबसाइटको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र 'स्टार्ट नाउ' बटन क्लिक गर्नुहोस्।
एसईओ प्रदर्शन को विश्लेषण खोज इंजन मा एक वेबसाइट को स्तर सुधार गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। यो तपाइँ तपाइँको वेबसाइट downranking को लागी जिम्मेदार कारक पहचान गर्न मद्दत गर्दछ।
विश्लेषण साइटको एसईओ प्रदर्शन सुधार गर्न पहिलो चरण हो। यसले सुधारका लागि आवश्यक कारकहरूको बारेमा तपाईंलाई सूचित गर्दछ, त्यसैले तिनीहरूमा काम गर्नुहोस्।
यद्यपि उत्तम मार्ग भनेको Semalt जस्तै डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीको सेवाहरू राख्नु हो। Semalt को साथ, तपाईं आफ्नो ओछ्यानमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको वेबसाइट अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय हुँदै जान सक्नुहुन्छ।